Inona avy ireo orinasa mpamokatra fanafody lehibe any India? | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny indostrian'ny fanafody India dia iray amin'ny lehibe indrindra manerantany. ny Orinasa mpamokatra fanafody any India miaraka izy ireo no mpamatsy zava-mahadomelina lehibe indrindra eran-tany. Ho fanampin'izay, manome mihoatra ny 60% amin'ny filan'ny vaksinina eran'izao tontolo izao izy ireo.
Tsy izany ihany fa: any India, dia efa ho 1.400 ny tobim-panafody ankatoavina ankatoavin'ny WHO. Mamokatra marika generika 60.000 eo ho eo avy amin'ny sokajy fitsaboana 60 isan-karazany izy ireo. Miaraka amin'ny orinasa mpamokatra fanafody maherin'ny 3.000 miasa ary tambajotra matanjaka misy laboratoara maherin'ny 10.500 XNUMX, dia azo lazaina tsara fa India no fivarotam-panafody lehibe eto an-tany.
Ny indostrian'ny pharmaceutika an'ny India Nalefa tamin'ny $ 2019 miliara dolara ny taona 36.000. Ny zava-mahadomelina jeneraly, miaraka amin'ny tsena 71%, no mandrafitra ny ampahany lehibe indrindra amin'ny famokarana azy.
Ity misy lisitr'ireo orinasa mpamokatra fanafody any India. Top 10:
1 Fikarakarana ara-pahasalamana Cadila
2 Torrent Farihy
7 Sun Farma
Fikarakarana ara-pahasalamana Cadila
Io no orinasa mpamokatra fanafody lehibe indrindra any India. Niorina tamin'ny 1952 tamin'ny Ramanbhai Patel ary monina ao Ahmedabad. ary nanjary orinasa mpamokatra fanafody lehibe indrindra any India.
Cadila Healthcare dia manana orinasa mpamokatra folo manerana ny firenena amin'ny toerana samihafa manerana ny firenena: Navi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa ary Patalganga.
Izy io koa dia manana ny foibeny ao Ahmedabad ary manamboatra zavamaniry amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena. Ny Pharma Torrent dia nanam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fanafody ho an'ny fitsaboana ara-pitsaboana ny rafi-pitabatabana afovoany (CNS), ny aretin-kibo, ny analgesika ary ny antibiotika.
Miaraka amin'ny fitomboana mahatalanjona tato anatin'ny folo taona lasa, CIPLA, natsangana tao Mumbai tamin'ny 1935, dia lasa iray amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody mahomby indrindra any India.
Mivoatra ny orinasa fanafody hitsaboana aretina isan-karazany toy ny fahaketrahana, diabeta na aretina taovam-pisefoana. Ny totalin'ny varotra dia manodidina ny 7.000 lavitrisa ropia isan-taona (eo amin'ny 78 tapitrisa euro). Izy io dia manana ivon-toeram-pamokarana fito izay misy mpiasa maherin'ny 22.000 miasa.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo orinasam-panafody lehibe any India, miaraka amina projet iraisampirenena malaza. Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1984 an'ny Dr Anji Reddy. Ny foibeny dia any Hyderabad ary mamokatra fanafody maherin'ny 180 ary koa fanafody maherin'ny 50.
Miisa fito ny zavamaniry Dr. Reddys Labs any India. Any ivelan'ny firenena, ny laboratoara dia manana laboratoara any Rosia ary mizara ny fanafody an'ny orinasa mpamokatra fanafody Belzika UCB SA any Azia atsimo.
Ny isan'ny varotra aminy dia maherin'ny 5.000 tapitrisa Rupee isan-taona. Lupine dia teraka tamin'ny 1968 noho ny fandraisana andraikitra Desh Bandhu Gupta, iray amin'ireo mpikaroka malaza indrindra eto amin'ny firenena. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia mivarotra ny vokariny amin'ny firenena maherin'ny 70 manerantany, ao anatin'izany i Afrika atsimo, Japan, Australia ary ny vondrona eropeana.
Orinasa farmasia malaza indrindra any India
Niorina tamin'ny 1988, Aurobindo Pharma Limited mifampiraharaha amin'ny famokarana sy ny famokarana zava-mahadomelina generika na akora ilaina. Niasa manokana tamin'ny faritra fitsaboana enina manokana izy: ny rafi-pitatitra foibe, ny aretim-po, ny antibiotika, ny vokatra antiretroviral, ny antiallergic ary ny gastroenterological.
Manondrana ny vokatra any amin'ny firenena maherin'ny 120 ny orinasa ary manana vola mitentina 4.000 XNUMX tapitrisa dolara isan-taona.
Iray amin'ireo orinasam-panafody lehibe any Idnia, natsangan'i Dilip shanghvi tamin'ny 1983 tany amin'ny faritr'i Vapi any Gujarat. Tamin'ny voalohany dia natokana hamokatra karazana fanafody dimy nifantoka manokana tamin'ny fitsaboana aretin-tsaina ny Sun Farma. Taty aoriana, nahazo ilay fanafody ny orinasa Ranbaxy, mampitombo ny renivohiny ary manitatra ny famokarana.
Ny 70% -n'ny zava-mahadomelina Sun pharmacea dia amidy any Etazonia. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nanomboka fanitarana mahery vaika ny orinasa ka nahatonga azy hanokatra zavamaniry any amin'ny firenena toa an'i Mexico, Israel na Brezila.
Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd. dia ekena ho a orinasa mitarika manerantany amin'ny famokarana sy fivarotana fanafody isan-karazany. Ny voninahitr'ity orinasa mpamokatra fanafody ity dia mitoetra ao amin'ny ambaratonga avo indrindra an'ny ekipany manam-pahaizana, ireo toeram-pitsaboana manankarena ary ny fampiasam-bolany amin'ny tetikasam-pikarohana vaovao.
Miorina any Bombay, Laboratoara Alkem dia iray amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody any India. Amidy any amin'ny firenena maherin'ny 40 ny vokatra ao aminy- Zava-mahadomelina jeneraly avo lenta, fanafody famenon-java-mahadomelina ary fanafody mahasalama Raha atotaly, marika 800 mahery no mandrakotra ny fizarana fitsaboana lehibe rehetra.
Alkem dia mivarotra sy mivarotra vokatra any Etazonia ambanin'ny mari-pamantarana miakatra. Toy izany koa, miasa amin'ny tsena hafa toa an'i Aostralia, Chile, Filipina ary Kazakhstan izy, ankoatry ny hafa.
Ny lisitray dia mifarana amin'ny IPCA Laboratories Ltd., orinasa manana traikefa enina am-polony mahery. Ny vokatra dia zaraina any amin'ny firenena 120 eo ho eo, raha ny sampana misy azy kosa dia nahazo fiderana avy amin'ny tompon'andraikitra lehibe mifehy ny zava-mahadomelina manerantany.
Ny iray amin'ireo tanjona kendrena amin'ny IPCA dia ny hitazomana ny kalitao avo lenta amin'ny vokatra rehetra ao aminy, amin'ny filokana amin'ny fitsaboana manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Inona avy ireo orinasa mpamokatra fanafody lehibe any India?
Raju Mahtani dia hoy izy:
Te hahafantatra ny anaran'ireo Laboratoara any India aho, izay voamarin'ny DIGEMID any Peroa
Valiny tamin'i Raju Mahtani
ELIAS TAHAN dia hoy izy:
Te hahafantatra ny lisitry ny vokatra laboratoara aho hahafantarana izay ananan'izy ireo sy hahafahan'izy ireo miara-miasa amin'izy ireo, manana Antenimieran'ny solontena izahay ho an'i Venezoela, Kolombia ary Amerika afovoany.
Valiny amin'i ELIAS TAHAN